Amanyathelo Alula Ukukwenza Ikhadi Lakho Lobhaliso Lwamhlanje - Make.id
Ingcamango yokwenza i-ID yesazisi yinto eya kuhlala ivuyisa kakhulu abo bathanda ukuthatha imingeni emitsha. Oku kungenxa yokuba uya kuba nelithuba lokwenza umsebenzi onokubangela ukuba ubuchule bakho bubunikwe. Nangona kunjalo, lo ngumsebenzi omnye ongaqhelekanga ukufeza. Kuthetha ukuba unokuchitha iiyure uzama ukudala ikhadi le-ID kwaye usagqiba ukuphazamiseka.
Kuthekani ukuba uboniswa ukuba wenze njani ikhadi le-ID oyithandayo? Ngaba uyazi ukuba awudingi ukunxibelelana nayiphi na umenzi wekhadi lomenzi we-ID ukuze enze oku kwenziwe? Kukho indlela elula kunye nenzima yokuhamba malunga nale nkqubo. Indlela yesibini iya kukhokelela ekukhungeni into ongayifunayo.
Esi sithuba siya kukubonisa ezinye zeendlela ezilula ukwenza ikhadi lakho lesazisi. Uya kutshitshiswa ngendlela elula ngayo iinkqubo ezinokufumaneka.
Inyathelo 1 - Ukucwangcisa ikhadi le-ID
Kuhlala kubalulekile ukuba ucwangcise ukuba kufuneka njani ikhadi le-ID. Indlela yodwa yokufumana eli lungelo lichonga injongo yayo ephambili. Ngokomzekelo, kufuneka ukwazi ukuba kutheni ikhadi lidalwa kuqala. Oku kunokufikelela kwindawo ethile, iqela labasebenzi, okanye ukubonisa ubungqina babo.
Oku kuya kukukunceda ukuba ufumane iinkcukacha zekhadi le-ID. Ngokomzekelo, ukuba wenza ikhadi le-ID ukuqinisekisa ukukhuseleko, kubalulekile ukuba wazi izinto ezifanelekileyo zokukhusela ezisetyenziswe. Ezi ziba ngumgca weMagnet, iBhalokhi okanye ifoto.
Inyathelo 2 - Ukukhetha i-website ye-ID yendalo
Iinkampani ezininzi ziya kukunceda nale nkqubo. Nangona kunjalo, ungakulibali ukuba inkampani enjalo kufuneka ibe ngumenzi wekhadi le-ID eliqinisekisiweyo. Oku kukunika ithemba lokuba umsebenzi wakho uya kwenziwa ngokwemiyalelo. Iinguqu kuphela ezifunekayo ukuba uzikhange xa ​​ukhetha inkampani yintlawulo ehlawule ngayo kwaye iya kuba nakho ukuhambisa iinketho zakho ezikhethiweyo.
Inyathelo 3 - Ukukhetha ithemplate yakho
Inkampani oqhagamshelana nayo kufuneka ibe neempendulo ezinokwenziwa ngaphambili ozikhethile. Uninzi lweenkampani zinika igumbi apho izifanekiso ezinokuthi zihlelwe ngaphambi kokuba ungeze umnxeba wokugqiba. Ukuba imeko i-templates ayinakuchukumisi kuwe, kunokwenzeka ukuba ufumane ikhadi le-ID elikhethiweyo ukusuka ekuqaleni. Oku kuya kuthatha ixesha lakho ngelixa.
Ukongezelela, kunokwenzeka ukuba uqhagamshelane nenkampani oyikhethile xa ungeke ukwazi ukufumana umntu oyithandayo okanye ungenalo ixesha elaneleyo lokufumana enye.
Inyathelo 4 - Ukukhetha okukhethwa kukho
Kukho iindlela onokuzifaka kuzo ngaphambili, emva kwekhadi le-ID okanye zombini. Le nto ingaba yiHolograph, umfanekiso wesigcawu okanye umbala, ifayili yombhalo, ukugqithisa, ukufumana umbhobho wokubetha, kubandakanywa ibhakhodi kunye nabanye. Ukuba uqwalasela indlela yokwenza i-ID, phawula ukuba ukhetho olukhetho luya kwandisa indleko. Kwakhona, kufuneka ukhethe okukhethiweyo ngokuchanekileyo ukuqinisekisa ukuba injongo ephambili yekhadi le-ID iyafumaneka.
Inyathelo 5 - Ukukhetha kweeNkxaso
Oku kuza emva kokuba ufanele wenze isigqibo malunga nokukhethwa kukho ukufakwa kwikhadi lakho njengoko kuchazwe ngasentla. Kufuneka kwakhona ukuba unqume ukuba ngaba loo khadi le-ID liya kuza kunye nezixhobo okanye cha. Ngokomzekelo, oku kunokuba ngumgcini webheji, i-clip, okanye i-lanyard.
Inyathelo 6 - Ukugqiba kwinani leekopi
Le yinyathelo lokugqibela emva kokuba ufanele uhambisane nalawo achazwe ngasentla. Uya kufuneka ube ngumntu othile kwinani lalo Iikhadi Zobunjani ku funeka. Ukuba uqhuba umbutho, inani labasebenzi onayo kufuneka lichane le nto.
Kwakhona, phawula ukuba amaninzi amaxesha iinkampani zinikeza izaphulelo ngokubhekisele kwiingaphi iikopi ongafaka umyalelo. Oku kuthetha ukuba phezulu inani lamakhadi oyalelayo, izaphulelo ezingaphezulu oza kufumana.
Emva kokubona amanyathelo angentla apha malunga nendlela yokwenza i-ID, kucacile ukuba le yinkqubo echanekileyo enokuyenza kwimizuzu emininzi xa usenza namhlanje. Kuphela kufuneka ulandele ngokulandelelanayo amanyathelo emva komnye ukufumana ikhadi le-ID elingakwazi ukuhlangabezana nenkampani yakho okanye iimfuno zabucala.